Silauti Times | » राजनीति राजनीति – Silauti Times
बेलायतको स्थानीय काउन्सिलकाे निर्वाचनमा विजयी भएका नेपाली उम्मेदवारहरू
लन्डन । बेलायतमा विहीबार सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । यस समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेपालीमूलका लक्ष्यबहादुर गुरुङ, कमल गुरुङ, विष्णुबहादुर गुरुङ, भीम सारु र सुमन पुन निर्वाचित बनेका छन् । लण्डन बोरो अफ...
जनप्रगतिशील मञ्चले मनायाे मजदुर दिवस
लन्डन । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट जनप्रगतिशील मञ्च यूकेले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नो धारणा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाएकाे छ । मे दिवसका अवसर पारेर मञ्चले आइतबार कार्यक्रम गर्दै दिवस मनाएको हाे । भर्चुअल रूपमा जुममा आयाेजित कार्यक्रम पार्टीका विदेश विभाग...
एक जसपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व माओवादी सांसद चौधरीसहित दुई दर्जन माओवादी केन्द्रमा समाहित
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व माओवादी सांसद कृष्णकुमार चौधरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा समाहित भएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उनीहरुलाई स्वागत गरेका हुन् । चौधरीसहित जसपा...
नेपाली समाज बेलायतमा जिम्मेवारीहरू तोकियो
लन्डन । नेपाली समाज बेलायतले संगठनमा थप जिम्मेवारीहरू ताेकेको छ । समाजको पहिलो विस्तारित बैठकले विभागीय जिम्मेवारीहरू ताेकेकाे हाे । शनिबार रिडिङस्थित एभरेष्ट तन्दुरी हलमा अध्यक्ष कमल प्रसाद राईको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा निवर्तमान कार्य समितिबाट सम्पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गर्नुको साथै...
धरान । धरानस्थित मुकुमलुङ होटलमा डा. कमल तिगेला लिम्बूको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)को पुनर्गठन भएको छ । चैत १७ गते पुनर्गठन भएको समितिमा अध्यक्ष डा.कमल प्रसाद लिम्बु (डा. कमल तिगेला)सुनसरी, उपाध्याक्ष डा. रुपक खनाल झापा, महासचिव...